शुक्रकीट तथा स्मरणशक्ति जस्ता कुरा बढाँउछ ओखरले ! | न्यूज समय
अधिकाँस पाहाडी भुभागमा फल्ने मानिसकालागि एउट अमृत समान फल हो ओखर । गोलो आकारमा कडा खोलले ढाकिएको फल ओखर सामान्य तयार गाँउ घरमा हाडे र दाँते गरी दुई तरिकाले चिनिन्छ । दाँते भन्नाले दाँतले सजिलै टोकेर फुटाई खान मिल्ने र कडा भन्नाले दाँतले टोकेर फुटाउन नसकिने खालको हुन्छ । जसलाई कडा बस्तुले ठोकेर फुटाउने गरीन्छ ।
ओखर स्वादिलो फलको रुपमा परिचित छ । यसबाट निस्कने तेलले मानिसलाई अत्यन्त फाईदा पुर्याउँछ ।
हिन्दु संस्कृति अनुसार तिहारमा भाई टिकाको समयमा घरको दैलोमा ओखर फुटाएर भाई टिका लगाईन्छ । यस्तो गर्नु कालो शेषनागले भाईलाई नडसोस भनि दिदीले कालो नागको टाउको फुटाएर भाईको सरक्षा र लामो आयु बढोस भन्नकालागि दैलोमा ओखर फुटाउने परम्परा छ । त्यसैले पनि नेपाली समाजमा ओखरको महत्व छ ।
के हुन्छ ओखरमा र खाए के फाईदा ?
ओखर खानाले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तरमा तीव्र गतिले कमी हुन्छ । यसले रगत नलीलाई झन् बढी लचिलो बनाउँछ र शरीरमा रक्तसञ्चार सहज भई मुटुमा बढी दबाब पर्दैन । ओखरले शरीरमा थर्मोजेनिक प्रभाव उत्पन्न गर्ने हुँदा मुटुको धमनीमा जमेको बोसो घुलनशील अवस्थामा आएर विस्तारै समाप्त हुन्छ । जसले गर्दा मुटुलाई रक्त सञ्चारका लागि बढी मेहनत गर्नु पर्दैन ।
एक मुठी ओखरमा ४ ग्राम प्रोटिन, २ ग्राम फाइबर र म्याग्नेसियम (१० प्रतिशत डीबी) हुन्छ । मानिसकालागि अत्यावश्यक ओमेगा ३, ओमेगा ६ र अल्फा लिनोलेनिक एसिड प्रशस्त हुने एकमात्र फल ओखर हो । ओखरमा भिटामिन बी, भिटामिन ई, म्याग्नेसियम, जिंक, कपर, आयरन, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट लगायतका प्रशस्त प्राकृतिक खनिज हुन्छ । सेवन गरेको चार घण्टापछि नै ओखरको फाइदा मिल्छ । ओखरको सेवनले अस्थामा, अर्थराइटिस, छालाको समस्या, एक्जिमा र सोराइसिसजस्ता रोगबाट समेत बच्न सकिन्छ । ओखरको नियमित सेवनले मस्तिष्क तेज हुन्छ र स्मरणशक्ति बलियो हुन्छ ।
पोषकतत्वले भरिपूर्ण प्रोटिनको राम्रो स्रोत रहेको ओखर वर्षभरि नै पाइन्छ । ‘जर्नल अफ न्युट्रिसन’ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार एउटा ओखर (२८.३५ग्राम) मा १ सय ४६ क्यालोरी हुन्छ ।
ओखर खानाले मुटु रोग, क्यान्सरलगायत अन्य रोगको जोखिम कम हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन ।
पुरुषको शुक्रकीट बढाउनमा समेत ओखर सेवनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पुरुषको प्रजनन स्वास्थ्य र क्षमतामा ओखरको सेवनले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
एक अध्ययनअनुसार दिनहुँ ७५ ग्राम ओखर सेवनले २१ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका स्वस्थ पुरुषमा शुक्रकीटको जीवनशक्ति, गतिशीलता र सामान्य आकृतिमा सुधार देखिएको छ  ।
यति मात्रै नभई ओखरका अन्य धेरै फाइदा छन् ।
ओखर सेवनले पाचनक्रियालाई राम्रो बनाउनुका साथै रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्छ र पेटसम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । ओखरको नियमित सेवनले पेटमा भएका कीराबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । ओखर भुटेर खानाले खोकीको समस्यामा समेत राहत पाइने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । ओखर सेवनले प्यांक्रियाज ग्रन्थीमा हुने क्यान्सरबाट बच्न पनि सहयोग पुग्छ । यसले महिलामा हुने स्तन क्यान्सरको सम्भावनालाई पनि कम गर्छ ।
रगत जम्नबाट रोक्न र डाइबिटिजबाट बच्न पनि ओखर सेवन लाभदायक हुन्छ । हेल्थटुडेबाट
कोरोना भाईरस प्रति बुद्ध एयरले अपनायो सचेतता, टिकट रद्द गर्न सम्म सकिने
२० फाल्गुन, २०७६